afrol News - Zimbabwe crossing fingers on SA's bailout
Zimbabwe crossing fingers on SA's bailout
afrol News, 20 February - Zimbabwe's finance minister Tendai Biti and his South African counterpart, Trevor Manuel will continue talks on a safe exit out of the current economic shame that has left the country in the worlds highest inflation, last estimated at over 231 million.
South African president, Kgalema Motlanthe told reporters in Cape Town today, following their meeting with the Zimbabwean delegation, that talks are expected to continue next week between the two countries' ministers on an emergency plan.
He was optimistic that by the end of next week there will be clarity on how South Africa could respond to Zimbabwe's request.
Zimbabwe's economic bail out is estimated to carry a cost of around US$ 5 billion in the short term and the delegation, led by newly appointed Prime Minister Morgan Tsvagirai, was hoping for at least $1 billion for its neighbour.
As the new regime in Zimbabwe faces a huge mountain of challenges brought about by years of administrative neglect and policies shooting from the hip, the government will also be looking at strengthening laws as a way fo reattracting foreign direct investment in the battered Southern African state.
Mr Tsvangirai told reporters in Cape Town today that his country needed urgent short-term interventions to kick start the economy.